Ny Fest St. Martin - nentim-paharazana sy mbola misy hatramin'izao
Md Martin - Tradition et Modernité
Hetsika ho an'i Martin
Fombafomba hafa mifandraika amin'i Martin
Ny 11. Natao fisaorana tamin'ny Novambra, satria andron'i Martine izany. Izany dia tamin'ny taona 397 ary nanomboka tamin'izay dia nankalazaina tany Eoropa Afovoany ny andro ary nifanalavitra ny faritra.
Martin lanina maitso manjelanjelatra
Raha manisa ianao, ity daty ity dia mikasika ny 40 andro mialoha ny Krismasy ary toy izany koa ny fiandohan'ny Karemy, tahaka ny vita amin'ny Moyen Âge, indrindra indrindra ao amin'ny Eglizy Ortodoksa.
Tahaka ny fiandohan'ny Karemy tamin'ny Talata, ny Andron'i Martin dia nanome fahafahana ny olona hihinana tsara sy hafahafa, talohan'ny andro manaraka ny 40 andro dia sakafo kely fotsiny na tsy misy na inona na inona.
Any Rhineland ny 11. Novambra ihany koa ny fanombohan'ny vanim-potoana karnavaly. Ankoatra izany, ny hetra dia naloa tamin'io andro io, matetika amin'ny hatsaram-panahy sy ny gisa. Ny biby dia tsy maintsy nokarakaraina tamin'ny ririnina, noho izany dia simba ny tahiry tamin'izany fomba izany ary tamin'ny trosa nialana tamin'izany.
Ny 11. Ny volana Novambra kosa anefa dia andro iray manokana izay niatombohan'ny fifandraisana asa na ny famerenana azy indray, izay nifarana ny fanofana ny fatiantoka na ny tombon-tsoa ary nanomboka indray. Ny andron'ny Martini dia efa fotoana tokony hanombohana sy hifarana amin'ny sehatra ara-toekarena ary noho izany dia antsoina hoe andro mahaliana izy io.
Ny fomba amam-pihinanana ny gisa Martin dia azo hazavaina toy izany, fa misy koa angano iray milaza ny fifandraisana amin'ny Martinsgans. Tsy maintsy notendrena ho eveka i Martin, izay tsy tiany sy niafina. Nifampiresaka i Geese ka namadika ny toeram-piafenany ary nahatonga azy ho afaka hanamasina azy. Saingy misy ihany koa tantara hafa momba ny sakafo goose nentim-paharazana, any Goatemalà, ny goose dia manompo any amin'ny ankamaroan'ny faritra miaraka amin'ny dumplings sy karaoke mena.
Ny tononkira Saint Martin dia misy tononkalo sy tononkalo amin'ny endrika mahafinaritra amin'ny ankizy miaraka amin'ny taratasy mozika fanangonana
Ireo paradisa koa dia natao any amin'ny tanàna madinika, ny kardinaly ao an-toerana dia afaka manana ny diany manokana, izay mitranga amin'ny daty samihafa noho ny fihetsiky ny mpianatra avy amin'ny sekolin'ny toerana. Ka mety hitranga izany any amin'ny paroasy sasany na in-telo na in-telo dia afaka mahita ny parade St. Martin. Raha toa ka tsy ampy ny mpanakanto ho an'ny St. Martin, nefa tsy misy intsony ary ny lamasinina indray mandeha indray mandeha.
Eto amin'ity procession ity, ny olona dia miaraka ihany koa miaraka amin'i Martin. Izany dia miankina amin'ny faritry ny miaramila miaramila romanina. Ireo mpandray anjara dia mihira an'i Martinslieder ary miaraka amin'ny tarika. Amin'ny faran'ny fizotran'ny procession, ny afo Martin St. iray, voaomana amin'ny fanaraha-maso henjana, dia miandry ny afo, izay taratra rehefa tonga ny mpikambana ao amin'ny lamasinina.
Sankt Martin - Hira Parade sy St. Martin-Ffeuer
Ny mpilalao St. Martin dia hilaza ihany koa ny teny vitsivitsy amin'ireo mpandray anjara ao amin'ilay fiaran-dalamby, angamba mba hahatsiaro ny tantaran'ny mpangataka sy ny fizaran'akanjo. Any amin'ny toerana maro, io sehatra io dia averina ihany koa.
Taorian'izay dia nahazo iray ny ankizy niaraka tamin'ny lamasinina niaraka tamin'ny fanilo Weckmann, Stutenkerl na Martin gisa vita amin'ny tsiratsiraka mamy, samy hafa arakaraka ny faritra.
Ny hetsika goavana indrindra mankany Martin dia mitranga ao Worms-Hochheim, ao Kempen any amin'ny Lower Rhine ary ao Bocholt. Ireo fiaran-dalamby dia manisa hatramin'ny mpandray anjara 6.000. Ho an'ny ankizy, ny Fetin'i Md Martin dia iray amin'ireo fety lehibe indrindra amin'ny fararano.
Miandrandra izany aloha izy ireo ary maniry ny hanamboatra takelaka. Mazava ho azy, ny ankizy kely dia mahazo ny fanohanan'ny ray aman-dreniny, saingy tsy voatery ho tonga lafatra izy io. Mazava ho azy fa misy mihira mandritra ny famolavolana, misy kakao mafana sy biskitsy ary mandritra ny lesona momba ny fitaovana izay mety orana na oram-batravatra ivelany, dia tsotra ao anaty.
Mazava ho azy fa manao fanilo mandritra ny fotoam-pianarana ny zokiny taona. Teo aloha dia efa mahazatra ny manamboatra siramamy siramamy ary ampiasaina toy ny fanilo toy izany.
Ankoatra ny fizarana ny palitao sy ny fihinanana ny Martinsgans dia manodidina ny St. Martin koa fombafomba hafa. Ny Martinssingen dia tsy natao fotsiny nandritra ny hetsika, fa taorian'izay na tamin'ny daty manokana.
Any amin'ny faritra maro, mandroso isan-trano miaraka amin'ny fanilo ny ankizy rehefa vita ny filaharam-pirazanana, mihira hira mihiratra ho an'ireo varavarana misokatra ary mangataka fanomezana kely. Ireo dia sangisangy, voankazo na zavatra hafa.
Eo amin'ny anaran'i Martinisingen dia fomban-drazana taloha no voatazona ao amin'ny fokonolona protestanta any Frantsa. Na izany aza, dia manondro an'i Martin Luther, izay ny anarany ihany koa amin'ny 11. Novambra dia ankalazaina. Any amin'ny faritra atsimon'i Alemana any amin'ny fokonolona protestanta dia ny belsnickel Manantena ny hitondra fanomezana amin'ny andron'i Martin sy indraindray Nussmärtel izany hoe.
Fety fankalazana ny andro nahaterahan'ny ankizy sy fankalazana hafa